Perfect Imperfection ( 2016 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel July 10, 2017
အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ Chinese Romantic Drama Film လေး တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ...
2016 မှာ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး Director Chen Bing က ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ...
- Cinderella and Four Knights ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက မင်းသားချောလေး Ahn Jae Hyeon
- 2014 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Dragon Sabre and Heaven Sword ( နဂါးနိုင်ဓား ) ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ကျောက်မိန်မိန် အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့တယ့် ထိုင်ဝမ် မင်းသမီးချောလေး Ady An
တို့က ပါဝင်ထားပါတယ် ...
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဟာသ ဇာတ်မြူး ပုံစံလေးဖြစ်ပြီး လူငယ်တွေအနေဖြင့် အကြိုက်တွေ့စေမယ့် ဇာတ်လမ်းမျိုးလေးပါ ...
ရဲရှောင်မန်း ( Ady An ) ကတော့ အသက် ၃၀ အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူမချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် အမျိုးသားတစ်ဦးကို ရှာဖွေရင်း single ဖြစ်နေသူပေါ့ ...
လျန်အန်း ( Ah Jae Hyeon ) ကတော့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ အယ်ဒီတာ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ... မိန်းမတွေနဲ့ ပွေရှုပ်နေသူ တစ်ဦးပေါ့ ...
ရဲရှောင်မန်း နဲ့ လျန်အန်း တို့ နှစ်ယောက် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံဖို့ အကြောင်းဖန်လာတဲ့အခါ ...
အကျင့်ချင်း ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေကြတဲ့ သူနှစ်ဦးချင်း ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကြမလဲ ?
အချစ်တစ်ခုဖြစ်တည်လာတဲ့အခါ ကြားမှာ ဘယ်လိုအတားအဆီးတွေ ဝင်ရောက်လာမလဲ ?
စတာတွေကို ဟာသလေးတွေ နှောပြီး ရယ်စရာလေးတွေ ဖြစ်တည်လာအောင် ရိုက်ကူးထားပါတယ် ...
Rating အရ MyDramaList မှာ 7/10 ရရှိထားပြီး ...
12 ကြိမ်မြောက် Chinese American Film Award မှာ Golden Angel Award ကိုလဲ ဆွတ်ဖူးရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ခုပါလို့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ် ....
Translator : ThanSin